BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/07/20140အကြံပြုခြင်း
ပြည်‌ခိုင်‌ဖြိုးပါတီ ဒု ဥက္ကဌ ဦး‌ဌေးဦး ပုပ္ပါး ‌တောင်‌ကလပ်‌ ဘိုး‌တော်‌‌အောင်‌မင်း‌ခေါင်‌ထံဆု‌တောင်းမှုများ ပြုလုပ်
News & Photos from Aung Gyi Dvb
ငြိမ်းချမ်းရေးဖလားရ မြန်မာဘောလုံးအသင်း စက်တင်ဘာ ၈ ရက် နံနက်ပြန်ရောက်မည်
Sun, 2014-09-07 15:56
WELL DONE! Myanmar,,,,,,,,
Thailand 1:2 Myanmar - AFF U-19 Youth Championship
ထိုက်ထိုက်အောင် က ၆၃ မိနစ်မှာ ပြစ်ဒဏ်ဘောကို အပေးအယူ
လုပ်ပြီး အဝေးက ကန်သွင်း.အလှဆုံးဂိုး
၁၉နှစ်အောက် နောက်ခံလူ ထိုက်ထိုက်အောင် သွင်း
Cheers & Congratulation ထိုက်ထိုက်အောင်
မြန်မာ - အင်ဒိုနီးရှား (ကြာသာပတေးနေ့) live!
ABSDF မှ ခွဲထွက်ပြီး ပြည်ထောင်စုကာကွယ်ရေးတပ်
UNRA အမည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်သည်။
ကျောင်းသား တပ်မတော်အဖြစ် ဆက်လက်မသွားတော့ပဲနဲ
့ ပြည်ထောင်စု ကာကွယ်ရေးတပ် ဆိုပြီးတော့ ပြည်ထောင်စုရဲ့
လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆက်လုပ်နိုင်ဖို့ ........
ဥက္ကဋ္ဌ ရဲဘော်ခင်ကျော်( စစ်ဦးစီးချုပ် )
ကိုခင်ကျော် ခွဲထွက်သွားတာဟာ ABSDF နှစ်ဖက်ကွဲသွားတာ မဟုတ်ပဲ သူတစ်ဦးတည်းဆောင်ရွက်သွားတာဖြစ်ကြောင်း၊ သူ့ကိုလည်း အဖွဲ့ ကနေ ထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်း
ABSDF ဒုတိယ ဥက္ကဌ ကိုမျိုးဝင်း